यस्ता छन् भिजाएको मेथीकाे आश्चर्यजन फाइदा, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
मेथी दानाको दैनिक जसो प्रयोग गर्दा बाँझोपनजस्ता समस्या हुँदैन । स्पर्म काउन्ट र क्वालिटी निकै राम्रो हुन्छ ।
२. स्वस्थ मृगौलाः
मेथी दानामा शरिरको टक्सिन बाहिर निकाल्ने क्षमता हुन्छ जसले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्याउँछ ।
३. ग्याष्ट्रिकको समस्याः
मेथी दाना नियमित रुपमा खाँदा ग्याष्ट्रिकको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । जलन र एसिडिटी पनि हुनबाट जोगाउँछ ।
४. सुगर नियन्त्रणमा रहन्छः
मेथीदानामा पाइने् सोलुबल फाइबर्स ब्लड सुगरलाई नियन्त्रणमा राखेर मधुमेहको खतरा घटाउने गर्दछ ।
५. हृदयघातबाट बचाउः
मेथी दानामा पाइने गेलाक्टोमेनन र पोटासियमले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ र हृदयघातबाट बचाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
६. बलियो पाचन प्रणालीः
भिजाइएको मेथी दानाले पाचन क्रियालाई बलियो बनाउँछ । कब्जियतसहित पेटका विभिन्न समस्यालाई टाढै राख्छ ।
मेथीदानाले शरिरको टक्सिन बाहिर निकालेर छालालाई स्वस्थ बनाउँछ । चायाँ, पोतो, डण्डीफोरबाट बचाउने गर्दछ ।
८. कालो, बाक्लो कपालः
बिहान दैनिक भिजाइएको मेथी दाना खाँदा कपाल चाँडै सेतो हुँदैन । झर्न पनि रोकिन्छ ।
मेथीदानाले पाचन क्रियालाई बलियो बनाएर कब्जियत र एसिडिटीलाई टाढै राख्छ । यसले पायल्सको समस्याबाट पनि राहत प्रदान गर्छ ।
१०. पिसाबको समस्याः
मेथी दानाले धेरै पिसाब लाग्नु वा पिसाबको संक्रमणजस्तो समस्यालाई टाढा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
नेपालीहरूलाई धेरै हुनेमध्येको रोग हो, पायल्स। खानपिनको कारणले होला पछिल्लो समय यो रोगबाट पीडित हुनेहरू बढिरहेका छन्।पायल्स भनेको दिसामा रगत जानु हो। जुन अवस्थामा दुख्ने भन्ने हुँदैन। दिसा गरिसकेपछि रगत जानुलाई हामी पायल्स भन्छौं। रगत जाँदा दुख्छ भने त्यो पायल्स होइन।
दिसा गर्दा दुख्छ तर रगत जाँदा दुख्दैन।पायल्स थुप्रै कारणले गर्दा हुन्छ। मुख्य कारण कब्जियत हो।महिलाहरूलाई गर्भावस्थामा पनि पायल्स हुन्छ। गर्भावती भएको बेलामा नसाहरू थिचिन्छ जसले गर्दा कब्जियत हुन्छ। त्यसपछि मलद्वारको नसा फुटेर रगत पनि जान्छ।
यसको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिला रोगको अवस्था हेर्नुपर्छ।पायल्स दुई किसिमको हुन्छ। मलद्वारको भित्री भागमा भयो भने त्यसलाई इन्टरनल हेमोराइट्स भनिन्छ। बाहिरी भागमा नसा पलाएको छ भने त्यो एक्स्टर्नल हेमोराइट्स हो, जुन छालाले ढाकिएको हुन्छ।
लापरबाही गर्‍यो भने जटिलता आउन सक्छ। रगत बढी जाने भएकाले रक्तअल्पताको खतरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ संक्रमण समेत हुन्छ।मासुको डल्लो बाहिरको बाहिरै रह्यो भने त्यहाँ घाउ हुन्छ भने नशामा रगतसमेत जम्छ। यसले क्यान्सर भने गराउँदैन।
पिसाब पोल्ने समस्या छन् ? यस्तो गर्नुस्
मुख्यतः पिसाव पोल्ने प्रमुख कारणमा पिसाव नलीको संक्रमण नै हो ।
पिसाब नलीको संक्रमण महिलाहरुमा धेरै देखिने गर्छ ।
गर्भवती अवस्थामा पनि यो धेरै देखिने समस्या हो ।
मिर्गौला, पिसाब जाने नली वा मूत्राशयको पत्थरीले पनि पिसाब पोल्ने लक्षण देखिन सक्छ ।
पत्थरीको कारणले मुत्रनलीमा संक्रमण हुन मद्दत पुराउँछ र पिसाब पोल्ने लक्षण देखिन्छ ।
विभिन्न यौनरोगहरु जस्तै गोनिरिया, क्लामैडिया आदिमा पनि पिसाब पोल्ने समस्या देखिन सक्छ ।
पुरुषलाई पिसाब पोल्ने अन्य कारणहरु प्रोस्टेट ग्रन्थीको संक्रमण वा उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेट ग्रन्थीको आकार बढ्नु पनि हो ।
पिसाब गर्न गाह्रो हुने वा दुख्ने
चाडो चाडो पिसाब लाग्ने
पिसाब थाम्न गाह्रो हुने
पिसाबको रंग बदलिने वा गाडा हुने
दायाँ वा बायाँ कम्मर दुख्ने
ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, काम्ने, चिडचिड पसिना आउने
यथेष्ट मात्रामा पानी पिउने ।
कम्तीमा पनि दीनको दुई लिटर पानी पिउनाले संक्रमण वा पत्थरी दुबैमा फाइदा गर्छ र पिसाब पोल्ने कम हुन सक्छ ।
यौनाङ्गको सरसफाइमा ध्यान दिनाले संक्रमणबाट जोगिन मद्दत पुर्याउँछ ।
यौनरोगहरुबाट बच्न विभिन्न सावधानीका उपायहरू अपनाउने ।
Don't Miss it यदि स्लिम बन्न मन छ भने पुदिनाको चिया पिउनुहोस्
Up Next कस्तो रोग हो एपेन्डिसाइटिस ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु, जान्नुहाेस्